अक्षयले अवार्ड फिर्ता गर्नु पर्छ या पर्दैन ?
प्रकाशित : बुधबार, बैशाख २५, २०७६१६:३२
फिल्म । पछिल्लो समय भारतमा लोकसभाको च्नुनावको चर्चा बढ्दो छ । कुन पार्टीले कति मत ल्याउने हुन् भन्ने गसिप बढ्दो छ । सबैले आफ्नो किसिमको विश्लेषण गरिरहेका छन् । यसै बीच चुनावमा बलिउडका सेलेब्सले पनि मतदान दिए र दिन आग्रह गरे । मतदान गरेपछि सबैले सोसल मिडिया मार्फत यसको प्रमाण पनि दिए । तर , त्यसमा बलिउडका खिलाडी एक्टर अक्षय कुमार देखिएनन् । उनले सोसल मिडियामा भोट दिएको तस्वीर शेयर नगरेपछि गसिप हुन् सुरु भयो , कतै उनले भारतीय नागरिकता त त्याग गरेनन् ।
जसबाट उनले क्यानेडियन पासपोर्ट लिएको रहस्य सार्वजनिक भयो । त्यसो त उनले क्यानाडाले सम्मान गर्दै उक्त पासपोर्ट दिएको स्वीकार गरिसकेका छन् , तर त्यसपछि उनि गसिप आइरहेका छन् । उनलाई दर्शक मात्र होइन , बि-टाउनका सेलेब्सले पनि सोसल मिडियामा मार्फत साथ् दिने र विरोध गर्ने क्रम बढ्दो छ । यस विषयमा अक्षयले पनि ट्विटर मार्फत नै आफ्नो प्रतिक्रिया दिईसकेका छन् । उनि गैर भारतीय रहेको विषयले चर्चा पाइरहदा उनले पाएको नेशनल अवार्ड के हुन्छ भन्ने विषयले पनि उत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ ।
कहिले उक्त अवार्ड खोस्नु पर्ने दादाब सहितको सोसल मिडिया फण्डा पनि गरिरहेका छन् । गत वर्ष फिल्म ‘रुश्तम’ मार्फत नेशन अवार्ड पाएका अक्षयले उक्त अवार्ड साथि प्रियादर्शनको कारण पाएको भन्ने पनि छन् । किनकी प्रियादर्शन जुरी मण्डलमा एक सदस्य थिए भने उनि अक्षयका नजिकका साथि हुन् । त्यसैले पनि यतिबेला उक्त अवार्ड अक्षयले फिर्ता गर्नु पर्छ या पर्दैन भन्ने विषयले उग्र रुप लिईरहेको छ ।
यो विषयले चर्चा पाईरहदा बलिउडका निर्देशक राहुल ढोल्कियाले भने अवार्ड फिर्ता नगर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले ट्विट गर्दै एउटा तस्वीर पनि शेयर गरेका छन् , जसमा अवार्ड पाउँन हुनु पर्ने नियम तथा शर्त उल्लेख छन् । उनले फिल्म हिन्दी हुनुपर्ने तर कलाकार जुनै देशको नागरिक पनि हुन् सक्नेमा जोड दिएका छन् । राहुलको ट्विटले अक्षयलाई केहि मात्रामा भएपनि राहत भने दिएको छ । साथै , अक्षयले नेशनल अवार्ड फिर्ता नगर्नु पर्ने पनि प्रष्टिएको छ । (एजेन्सी)
आलियाको हलिउड तयारी
प्रभासको फिल्ममा श्रद्धाको पारिश्रमिक कति ?
‘सिम्बा’ टाइटल गीत रिलिज (भिडियो)
संजय र सलमानको फिल्मको नाम फाइनल ?
एक्सनले टिकेका निखिल